၁၃၅+ ရက် Fapstronaut - သင့် ဦး နှောက်ပေါ် Porn မှထိပ်ဆုံးအချက် ၁၀ ချက်
တစ်ဦး 135 + နေ့က Fapstronaut ကနေထိပ်တန်းဆယ်ပါးအကြံပေးချက်များ
ကျွန်တော် ၁၃၅ ရက်ကျော်သန့်ရှင်းပါတယ် ငါဖိုရမ်ကိုများများသုံးနေတုန်းမှာလူအများဟာအရင်ကလိုမျိုးကျရှုံးနေဆဲကိုသတိပြုမိကြသည်။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးတသမတ်တည်းရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်ဆယ်ခုမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
၁။ ကုသရန်သင်၏ကန ဦး ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်ပြီးမေးခွန်းမထုတ်ပါနှင့်
စွဲလမ်းသူ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင်နေထိုင်သည်။ ၎င်းသည်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားပြီးသင့်အားသန့်ရှင်းစွာသွားရန်သင်၏ရွေးချယ်မှုကိုဆင်ခြင်ရန်သို့မဟုတ်မေးခွန်းထုတ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ဒါကဓာတုဗေဒစွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ သို့သော် Gretchen Reuben ကမိမိကိုယ်ကိုကူညီစာအုပ်များရေးသားသူကိုယ်တိုင်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုအများဆုံးလိုက်နာသူများသည်တစ်ချိန်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုမဖြုန်းတီးဘဲဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆက်လက်တောင်းခံနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ပါ၊ ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၉၀ မဆင်မခြင်လိုက်လျှောက်ပါ။ ၎င်းသည်သာမန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားစိန်ခေါ်မှုမှတဆင့်ကူးပြောင်းနိုင်ပြီးသင်ဘာကြောင့်ပြန်ဆုတ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုသင်၏နားထဲတွင်မုသာနှင့်မှားယွင်းမှုများအားလုံးကိုတီးတိုးပြောသော gremlin မှသင့်အားကာကွယ်လိမ့်မည်။ ထို gremlin စကားကိုနားမထောင်ပါနှင့်။ သင်ရွေးချယ်ခဲ့သောတစ်ချိန်ကသင်ကိုယ်တိုင်ပြောပါ၊ ၎င်းကိုသင်မစဉ်းစားတော့ပါ။
2 ။ နောက်ကျောကွာဆိုတင်းမာမှု၏လက္ခဏာသက်သေမှာအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များမှ
သငျသညျ psub ရှာကြံ၏ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ကြသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရလျှင်, ချက်ချင်းပယ်သင့်ရဲ့စက်ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့် (ဖြစ်နိုင်ရင်အများပြည်သူအတွက်) အခြားတစ်ခုခုလုပ်သွားပါ။ ငါသည်ငါ့ထွက်ပေါက်တည်နေရာအဖြစ်အသုံးပြုရသောငါ့အိမျအနီးကော်ဖီဆိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တဦးတည်းကိုယ်အဘို့ကို pre-စီစဉ်ထားရှိခြင်းအသုံးဝင်သောသက်သေပြနိုင်ပါတယ်။
3 ။ သငျသညျ PMO ဖြတ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်နေ့စဉ်ကိုယ့်ကိုယ်သတိပေးပါ
ဒါဟာသင်အလွယ်တကူမြင်မှတဆင့်ဖတ်နိုင်ပုံနှိပ်သို့မဟုတ်တစ်နေရာရာကိုထုတ်ရေးသားထားသောအကြောင်းပြချက်များစာရင်းကိုရှိခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုပြည့်စုံစေ့စပ်စာရင်းဖန်တီး, ပြီးတော့သင်ဖတ်ရှုဖို့အများဆုံးလှုံ့ဆော်မည်ဟုခံစားမိရာထိပ်ဆုံးငါးထွက်ကြိုလိမ့်မယ်။
4 ။ NoFap အပေါ်ဒီမှာလျစ်လျူရှုအဖွဲ့ဝင်အင်္ဂါရပ်၏တနျခိုးကိုသုံးပါ
ဝမ်းနည်းစရာမှာလူတိုင်းကိုမကယ်တင်နိုင်ပါ။ လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိုသည်မဟုတ်ပါ။ လူများကို Ignore စာရင်းတွင်ထည့်ခြင်းဖြင့် NoFap တွင်သင်၏အချိန်ကိုအမြင့်ဆုံးထားပါ။ အခြားသူများသည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လေ့ရှိကြောင်းမကြာခဏဖတ်ခြင်းကသင့်အားဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ သင်အသက် ၉၀ ရောက်နေစဉ်သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာခြင်းကြောင့်သင့်အားထိတွေ့ခံရလိမ့်မည်မဟုတ်သို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးမှုလည်းလည်းမရှိပါ။ ဤဖိုရမ်သို့လည်ပတ်မှု၌သင်မြင်တွေ့ရသောစာရင်းသည်သင့်အားစိတ်အားတက်ကြွစေမည့်သူများသို့မဟုတ်ရှေ့သို့သွားရန်သင်၏ဆန္ဒကိုထင်ဟပ်စေရန်ဤအရာကိုရယူပါ။ အခက်အခဲအများဆုံးရှိသူများနှင့်သင်၏ထိတွေ့မှုကိုကန့်သတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်ခြင်းနှင့်သူတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များသည်သင့်ကိုအမှန်တကယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ဒါဟာသင်နှင့်အတူ piss ဖို့အသုံးပြုတစ်ခုခုနှင့် pisses စဉ်အတွင်း, သင်ကတက်ကိုင်ရန်သင့်အတွင်းခံအဝတ်အစားတီးဝိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ နံနက်ယံ၌ထင်းခွေစဉ်အခါ၊ ထိုအရာကိုမှတ်တော်မမူပါနှင့်။ သင်နှင့်သင်၏ဒစ်ခ်သည်စကားအသုံးအနှုန်းများနှင့်သင်၏လက်များပေါ်တွင်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ရေရှည်အချိန်ကုန်ဖြစ်သည်။
၆။ သင်တကယ့်ဘ ၀ ၌ရရှိခဲ့သောနေ့ရက်များကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ
တစ်နေရာရာတွင် ၉၀ မှသင်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သည့်နေ့ရက်များကိုကိုယ်စားပြုသောမြင်သာထင်သာသောအရာတစ်ခုခုကိုစတင်ဖန်တီးပါ။ ကြိုးတွင်ရှိသော knots များ၊ ရေချိုးခန်းမှန်ပေါ်ရှိခြောက်သွေ့သောဖျက်ခြင်းအမှတ်အသား၊ စားပွဲပေါ်ရှိကဒ်ပြားများ။ ဤစုဆောင်းမှုသည်သင်တည်ဆောက်နေသောအရာဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ ၎င်းသည် NoFap အပြင်နှင့်လက်တွေ့ဘ ၀ တွင်ရှိလျှင်၎င်းသည်ပိုမိုမှန်ကန်စေသည်။
7 ။ အခြားနည်းလမ်းကိုယ့်ကိုကိုယ်တည်ဆောက်မှ Continue
NoFap အပြင်စိန်ခေါ်မှုအပြင်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာထားပါ။ သင်၏ရပ်ကွက်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းကားကိုဆေးကြောပါ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါ၊ အပြင်ထွက်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေပါ၊ သင်ဤအရာများလုပ်ဆောင်သည့်အခါအားလုံးစတင်အရည်ပျော်လာပြီးအပြုသဘောစီးဆင်းမှုသည်သင်၏ Streak တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
8 ။ အပေါ်သွားနှင့်သင်သည်အဘယ်အရာကိုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုပြောပြပါ
မင်းမိသားစုကမင်းမဟုတ်ဘူးနော်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြပြီးသင်ကိုဂရုစိုက်တဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူဟာလူတစ်ယောက်လား။ (အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်ဤအချက်ကိုပိုမိုနားလည်သည်။ ) အဲဒီမှာရှိရင်မင်းကိုမင်းစွဲနေတယ်လို့ခံစားရပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်သန့်ရှင်းအောင်ကူညီဖို့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုလုပ်နေတယ်လို့သူကိုပြောပြပါ။ ဒါဟာလုပ်ဖို့အင်အားကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုဆီသို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ မင်းမှာဒီလိုသူငယ်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်၊ ဘုန်းကြီးကိုသွားပြီးသူတို့ကိုအသိပေးရုံတင်မကဘူး။ သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုသည်ကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ဘဝဇာတ်ကြောင်းနည်းပြတစ် ဦး နှင့်တွေ့ပြီးပဲများကိုဖိတ်ပါ။
9 ။ အရက်နှင့်အတွေး-ပြောင်းလဲနေတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများရှောင်ကြဉ်ပါ (ဒီ MO ကိုတို့ပါဝင်သည်)
သင်၏အတွေးများနှင့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုလျော့နည်းစေသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုရှောင်ပါ။ သငျသညျရှာပုံတော်အပေါ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်အတွေးနှင့်စွမ်းအင်၏ iota အပေါငျးတို့သလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျထိန်းချုပ်မှုရှိသည်နှင့်ဖြစ်ပေါ်မရှောင်ကြဉ်ရန်အစဉ်မပြတ်သတိထားပါရန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သမ္မာသတိရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
10 ။ ကောင်းစွာအိပ်ပျော်နှင့်ညဉ့်-စဉ်းစားတွေးခေါ်သို့မဟုတ်ညဥ့်အချိန်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှား
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားနည်းချက်ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သည်ပင်ပန်းလာပြီးအိပ်စက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချိန်အတွင်း PMO သို့ ဦး တည်သွားစေနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်ကိုနေ့စဉ်အိပ်ပါ။ သင်စဉ်းစားရန်လတ်ဆတ်ဆုံးဖြစ်သောနံနက်အချိန်၌အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များချလိမ့်မည်ဟုသင့်ကိုယ်သင်ကြေငြာပါ။
ထိုအရပ်၌သင်ကရှိသည်။ မူလကကျွန်မရဲ့အသက်အုပ်စုတွင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဘို့ဤလုပ်ပေမယ့်ငါစိန်ခေါ်မှု၏အဆုံး ဖြတ်. သင်တို့ကိုအများအပြားတွေ့မြင်ရမှာကဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ခံစားရအဖြစ်အပေါငျးတို့သ fapstronauts အတူမျှဝေချင်တယ်။
သင်၏ခရီးစဉ်တွင်အကောင်းဆုံးဆန္ဒများကိုမမေ့ပါနှင့်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ပြီးခိုင်မာပါ။ မနက်ဖြန်ငါတို့မှာအာမခံချက်မရှိဘူး၊ ဒီတော့မင်းကကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုထွက်သွားမလဲ။ အစွမ်းသတ္တိနှင့်မဟာဗျူဟာနှင့်အတူတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်။ သင့်ကိုယ်သင်လေးစားပါ အနိုင်ရ!
LINK - တစ်ဦး 135 + နေ့က Fapstronaut ကနေထိပ်တန်းဆယ်ပါးအကြံပေးချက်များ